DEG DEG:- Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho
Waxaa goordhaw garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kasoo degtay diyaarad uu la socdo madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Mas’uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ammaanka Sheekh Shariif haatan la wareegay ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa UGANDA iyo ciidamo gaar oo Soomaali ah.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb galo tartanka doorashada sanadkaan ka dhici doonta dalka ee xilka madaxtinimada Soomaaliya, isagoona dhawaan arrintaasi kaga dhawaaqi doono magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, Sheekh Shariif ayaa ka mid ah musharixiinta ugu cad-cad ee ciriiriga gelin kara madaxweynaha haatan xilka haaya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo isna dhawaan ka qeyb-gali doono doorashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ee dhawaan dalka ka dhici doonta.
Dhinaca kale, ammaanka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa haatan ah mid aad loo adkeeyay, waxaana Sheekh Shariif haatan loo gudbiyay qeybta VIP-da.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah saxafiyiinta ayaa haatan ku sugan dibadda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, maadaama amar habeenkii xalay kasoo baxay maareeyaha garoonka saxafiyiintaasi looga mamnuucay in muddo 60 maalmood ah aysan garoonka gudaha usoo gali karin.